राजतन्त्र र गणतन्त्रको बुझाईमा प्रधानमन्त्री नै अलमलमा ! भारतको उदाहरण दिएर नेपालमा शासन गर्न सुहाउँछ ? « Nepal Bahas
राजतन्त्र र गणतन्त्रको बुझाईमा प्रधानमन्त्री नै अलमलमा ! भारतको उदाहरण दिएर नेपालमा शासन गर्न सुहाउँछ ?
प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार १८:३७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवस घरघर र परिवार–परिवारमा मनाउनु पर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज आयाेजित गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने जनताले हेर्ने मात्रै नभई जनताको सहभागितामै मनाइनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “यो दिन परिवारभित्रै पनि उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्छ । केही नभए घरका बच्चालाई यो दिवसको अवसर पारेर चकलेट वितरण गर्नुहोस्, किनकि आजको त्यो चकलेट खाने बच्चा भोलिको राष्ट्रपति हुन सक्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र जनताले लडेर ल्याएको बताउँदै यो दिनलाई जनताले साझा चाडका रुपमा उत्साहसाथ मनाउनु पर्नेमा जोड दिए । केही तत्वले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको तर त्यो स्वीकार्य नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘यो जनतामाथिको हमला हो, जनतामाथिको अपमान हो । यो आपराधिक कार्य र देशद्रोही कुरा हो ।”
जनता चुप लाग्दा प्रतिगामी तत्व सल्बलाउन थालेका छन् भन्दै जनता सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । राजतन्त्रमा हुने जन्मसिद्ध श्रेष्ठता पाखण्डी सिद्धान्त भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो । उनले भने, “गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको वास्तविक रुप हो, प्रतिस्पर्धी प्रणाली हो ।”
‘राष्ट्रपतिको भनाइ सही’: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्नु अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतसहित संसारका धेरै देशमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रधानममन्त्रीले नेपालमा पनि सोही अनुरुप राष्ट्रपतिले भन्नु जायज रहेको बताए । उनले भने “मेरो देश, मेरो भाषा भनेजस्तै मेरो सरकार भनिएको हो, यसलाई मेरो नीति भनिएको भनेर व्याख्या गर्न भएन ।”
प्रधानमन्त्रीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका आधारमा चयन भएको राजतन्त्रमा ‘मेरो सरकार’ भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुने तर जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिले भन्नु अनुपयुक्त हुने भनी गरिएका टिप्पणी नै गलत भएको ठहर गरे ।
नीति कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष र विपक्षीका सांसदले आ–आफ्नै धारणा राख्ने क्रम जारी छ । राष्ट्रियसभामा प्रारम्भ भएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजतन्त्रका बेला ‘मेरो सरकार’ भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै नीतिमा उल्लेख यस शब्दका सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तहमा भइरहेका टीका टिप्पणीलाई आत्मसात् गरी सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष कारागार बसेका प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारलाई किन यो शब्द प्यारो लागेको भनी प्रश्न गर्दै उनले संशोधनअनुसार नीतिलाई सच्याउन आग्रह गरे । नीतिमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उचित व्यवस्था उल्लेख नभएको तर्क गर्र्दै सांसद पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आग्रह गरे
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने कुनै ठोस योजना नभएको उल्लेख गर्दै उनले गत वर्षको नीति कार्यक्रमका कैयौँ बुँदा जस्ताको तस्तै र केहीमा शब्द तलमाथि गरेर यो नीति ल्याएको बताए । सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भने पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिना बोलपत्र कुनै कम्पनीलाई दिनु भ्रष्टाचार भएको बताए।
सांसद खिमलाल भट्टराईले यो सरकारले योजनाबद्धरुपमा जनजीविकालाई परिवर्तन गर्न नीति ल्याएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्न सकिने बताए । उनले हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपरेको मुलुक आज विकास समृद्धिको चरणमा रहेकाले सरकारले त्यसलाई दृष्टिगत गरी यो नीति ल्याएको भन्दै नीतिको स्वागत गरे ।
नीतिको सार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नै हो भन्दै सांसद भट्टराईले यसले आर्थिक रुपान्तरणको खाँका कोर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा विश्लेषण गर्न सकिने बताए । नीति कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणलाई आत्मसात् गरेको अवगत गराउँदै उनले ठूला आयोजनाका काम धमाधम भइरहेको बताए । दिगो र फराकिलो विकासका लागि रेल र पानीजहाजका काम गर्नैपर्छ भन्दै उनले सरकारका काम र योजनाबाट युवा र निम्न वर्ग उत्साहीत भएको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद रामनारायण बिडारीले नीतिमा उल्लेखित ‘मेरो सरकार’का सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद गरिएको उल्लेख गर्दै यही सरकार बनेपछि चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार भएको बताए । उनले नीतिमा भएका जनताका हितका योजनालाई खोक्रो भन्नु गलत भएको उल्लेख गरे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमको मूल लय पक्रन नसकेको आरोप लगाउँदै यसले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आहत दिने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले नीति तथा कार्यक्रमले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरे । बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा र प्रतिपक्षी दलका सांसदले विपक्षमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
देशभर कांग्रेसको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६० क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न